वीर, पाटन र टिचिङ अस्पताललाई... :: समिक्षा अधिकारी :: Setopati
वीर, पाटन र टिचिङ अस्पताललाई हाम्रो प्रश्न- कोरोना उपचारमा तयारी के छ?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, माघ २१
टेकु अस्पतालको सोधपुछ कक्षमा कोरोना भाइरसबारे सोधपुछ गर्न र जचाउन आउनेहरूको भीड बढ्दैछ। चीनबाट हरेक दिन नेपालीहरू फर्किने क्रमसँगै यो चाप काठमाडौंका अन्य ठूला अस्पतालमा पनि सर्नसक्छ।
हुन त यस्तो सरूवा रोग उपचार गर्ने ठाउँ टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल नै हो। त्यहाँ यसनिम्ति 'आइसोलेसन वार्ड' छुट्टयाइएको छ। शंका लागेका बिरामीलाई उक्त वार्डमा राखेर उपचार गरिँदै आएको छ। सरकारले अरू अस्पताललाई यस्तो जिम्मेवारी तोकेको पनि छैन।
तर, चीनबाट फर्कनेहरू बढ्दै जाँदा काठमाडौंका अन्य ठूला अस्पतालले पनि आफ्नो तर्फबाट तयारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
यही सन्दर्भमा हामीले मंगलबार वीर, टिचिङ र पाटन अस्पतालसँग यसबारे कुराकानी गर्यौं।
काठमाडौंमा सबभन्दा बढी बिरामी चाप हुने वीरका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले कोरोना भाइरसको हल्ला फैलिएपछि एक सातायता दुई शैय्याको 'आइसोलेसन वार्ड' बनाइएको जानकारी दिए। बिरामी पहिचान भए अन्य वार्ड खाली गर्नुका साथै आवश्यक उपचार गर्न वीर तयार रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार, वीरले इमरजेन्सी वार्डमै शंकास्पद बिरामी निम्ति दुईवटा बेड छुट्याएको छ। यसबाहेक डाक्टर तथा नर्सले उपचार गर्दा लगाउने गाउन, मास्क, पञ्जा र अन्य सर्जिकल सामग्री व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।
निर्देशक सेन्चुरीले कोरोना भाइरससँग जुध्न तयारी भइरहेको बताइरहँदा हामीले अघिल्लो दिन वीरका नर्स र सोधपुछ कक्षका कर्मचारीसँगको कुराकानी उनलाई सुनायौं।
सोमबार वीरका एक जना नर्सलाई हामीले सोधेका थियौं, ‘कोरोना भाइरस जचाउने ठाउँ कता हो?’
उनले आफैं अत्तालिँदै भनेकी थिइन्, ‘यहाँ हैन, यहाँ हैन, टेकु अस्पताल जानुपर्छ।’
त्यसपछि हामीले सोधपुछ कक्षमै गएर सोध्यौं, 'कोरोना जचाउने ठाउँ यतै हो?’
त्यहाँ बसेका व्यक्तिले आश्चर्य मान्दै भने, ‘के हो त्यो कोरोना भनेको? उता रिपोर्ट लिने ठाउँमा गएर सोध्नू त।’
हाम्रो यस्तो अनुभव सुनेपछि सेन्चुरीले जवाफ दिए, ‘इमरजेन्सीमा गएर सोधे मात्र थाहा हुन्छ।' उनले वीरअन्तर्गतका १५ अस्पताललाई सम्भावित जोखिम निम्ति तयार रहन निर्देशन दिएको पनि बताए।
यस्तै भनाइ पाटन अस्पतालको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत रहेको पाटनले पाँच बेडको आइसोलेन कक्ष छुट्याएको बताएको छ। प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. विष्णु शर्माले आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइसोलेसन बेड छुट्याउनु मात्र तयारी भने होइन। उपचार क्रममा चाहिने ३६ किसिमका मेडिकल सामग्री पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। यसबारे सोध्दा डा. शर्माले भने, ‘सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्न हामी तयार छौं। उपचार सामग्रीहरू मगाएका छौं। अहिलेलाई बिरामी आइहाले उपचार गर्न सक्छौं भन्न मिल्छ।’
टिचिङ अस्पताल महाराजगन्जले भने अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेको छैन। शंकास्पद बिरामी आएको खण्डमा टेकु वा अन्य अस्पताल पठाउनुको विकल्प टिचिङसँग छैन।
कोरोना भाइरस उपचार गर्न टिचिङ अस्पताल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले कुनै तयारी नगरेको त्यहाँका निर्देशक डा. प्रेम खड्काले बताए।
‘सरकारले यसको जिम्मेवारी अन्य अस्पताललाई दिएको छ। हामीसँग कुनै तयारी छैन,' उनले भने, 'बिरामी आइहाले अन्यत्र रेफर गर्ने हो।’
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि चीनको हुवेइ प्रान्तमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई सरकारले फिर्ता ल्याउने र दुई साता क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी गरिरहेको छ।
यसबीच अन्य विभिन्न प्रान्तबाट आफ्नै खर्चमा फर्किने क्रम जारी छ। तीमध्ये धेरै जना संक्रमणको डरले सोझै घर जान नसकेर होटलमा बसेका छन्। जचाएर ढुक्क हुन टेकु अस्पताल गए पनि राम्रो परीक्षण नपाएको गुनासो गर्छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २१, २०७६, ११:१५:००